Duqeymo xalay ka dhacay degmooyinka Jilib iyo Jamaame – Hornafrik Media Network
Wararka aan ka heleyno gobolka Jubbada Dhexe ee koonfurta Soomaaliya waxay sheegayaan in xalay duqeymo kala duwan ay ka dhaceen degmooyinka Jilib iyo Jamaame.
Ilaa labo goobood oo ay Al-Shabaab ku lahaayeen degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa la sheegay inay beegsadeen diyaaraduhu, waxayna saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya sheegeen inay ku jirto goobaha la duqeeyay xaruunta isgaarsiinta guud ee dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku lahaayeen koonfurta Soomaaliya.
Sidoo kale saraakiisha war doonka ee u hadlay ciidanka dowladda sheegay in duqeynta labaad ee ka dhacday degmada Jilib lala beegsaday hoyga sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab oo lagu magacaabo Abuu Cabdalla, kaas oo ku yaala afaafka hore ee degmada Jilib.
Saraakiisha ayaa sheegay inay xaqiijiyeen xiliga la duqeyay guriga sarkaalkaas uu ka maqnaa, balse la burburiyay guud ahaan guriga iyo gaadiid ku xareysnaa.
Ma jirto cid ilaa hadda xaqiiji karta khasaaraka ka dhashay duqeymihii xalay ka dhacay degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe, oo lagu bartilmaameedsaday goobo kala duwan.
Dhinaca kale duqeyn ayaa isla xalay ka dhacday degmada Jamaame waxaana la sheegay in bartilmaameedka duqeyntaas uu ahaa xarun ay ku shirayeen saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, kaas oo sida la sheegay ay uga arinsanayeen amniga saraakiisha Al-Shabaab waxaana la sheegay in shirkaas horay loogu qaban jiray degmada Jilib hase yeeshee looga wareegsaday arimo amaan.
Saraakiisha u hadashay ciidamada dowladda Soomaaliya ayaan wali xaqiijin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay duqeyntii ka dhacday degmada Jamaame.